Cacisa ulwazi lokujolisa kwindawo ekujoliswe kuyo umazibuthe ojikeleze umazibuthe
Imagnetron sputtering ibandakanya iintlobo ezininzi, nganye inemigaqo yokusebenza eyahlukeneyo kunye nezinto zesicelo, kodwa inye into efanayo: Unxibelelwano phakathi kwentsimi yamagnetic kunye nee-elektronon zenza ukuba i-elektrononi zijikeleze zijikeleze umphezulu ojolise kuwo, ngokwenjenje kwandisa ukubakho kwee-elektronon ezibetha igesi yeargon ukuvelisa ii-ion..Iion ezivelisiweyo zingqubana nomhlaba ekujoliswe kuwo phantsi kwesenzo sombane ukuya kutshiza ujoliso ekujoliswe kulo., wonke umntu ngokuthe ngcembe amkele iimagnethi ezisisigxina, kwaye azifane zisetyenziswe iimagnethi zekhoyili..
Umgaqo wokuphindaphindwa kwamaza aphakathi ngokufanayo uyafana nokuchithwa jikelele kweDC. Umahluko kukuba i-DC sputtering isebenzisa umgqomo njenge-anode, Ngelixa ukuphindaphindwa kwamaza aphakathi kubhangqiwe. Nokuba umphanda uthatha inxaxheba kufuneka ugqitywe kuyilo lulonke, kunye nenkqubo yonke Ngexesha lenkqubela, Ukulungiswa kwe-anode kunye ne-cathode kuhambelana. Zininzi iindlela zokuthatha inxaxheba kumjikelo womyinge. Iindlela ezahlukeneyo zinokufumana izivuno ezahlukeneyo zokutshiza kunye noxinaniso lweeon ezahlukeneyo..
Itekhnoloji ephambili yokuphindaphindwa kokuphindaphindwa kwamaza ilele kuyilo kunye nokusetyenziswa kombane. Ngoku, Ezona ndlela zokukhula zivuthiweyo zi-sine wave kunye ne-pulse wave wave. Nganye inezibonelelo zayo kunye nezinto ezingalunganga. Ekuqaleni, Cinga uhlobo lokwehla kwefilimu kwaye uhlalutye indlela efanelekileyo yokuvelisa umbane. Uluhlu lwefilimu, ungasebenzisa iimpawu zonikezelo lwamandla ukuze ufumane isiphumo esifanelekileyo kwifilimu.
Ujoliso lusetyenziselwa iithagethi eziphakathi ezihamba rhoqo, kwaye ezinye izinto ekujoliswe kuzo zisebenzisa izibini ezithathu. Ngokubhekisele kumaxesha aphakathi, uninzi lwezinto zokusebenza zityatyekwe ngesinyithi..Izinto ezinjalo zokucoca izinto zenziwe ngokubanzi zinkulu kakhulu, enokubeka iindawo ezininzi zomsebenzi, kunye nomfanekiso weplanga ujiye ngakumbi..
Prev: Uhlobo olutsha lwendlela yokuvelisa ekujoliswe kuyo ye-titanium-aluminium
Next: Ushwankathelo lweethagethi zeITO
» Ukuxinana kwesihlobo kunye nokuqina kwezinto ekujolise kuzo kuwuchaphazela njani umgangatho wokutyabeka?
» Impembelelo yokujolisa kokujongwa kokucoceka kunye nokufana kwezinto kwimveliso enkulu yokutyabeka
» Kutheni le nto imveliso yefilimu iwe ngexesha lokutyabeka
» Ushwankathelo lweethagethi zeITO
» Cacisa ulwazi lokujolisa kwindawo ekujoliswe kuyo umazibuthe ojikeleze umazibuthe
» Uhlobo olutsha lwendlela yokuvelisa ekujoliswe kuyo ye-titanium-aluminium
Ukuxinana kwesihlobo kunye nokuqina kwezinto ekujolise kuzo kuwuchaphazela njani umgangatho wokutyabeka?
Impembelelo yokujolisa kokujongwa kokucoceka kunye nokufana kwezinto kwimveliso enkulu yokutyabeka
Kutheni le nto imveliso yefilimu iwe ngexesha lokutyabeka
Ushwankathelo lweethagethi zeITO